Gadzira mameseji ane nhamba yefoni kana ine email account | Ndinobva mac
Gadzira mameseji ane nhamba yefoni kana email account
Imwe yemabhenefiti atinayo muApple ecosystem ndeyekuti, kwenguva yakati ikozvino, iyo Messages application inogona kushandiswa pane chero chishandiso chayo, ndiko kuti, tinogona kutanga hurukuro paMac toipedzisa pane iyo iPad kana iyo Iphone . Zvese izvi zvinogoneka nekuda kweiyo Meseji kunyorera ndeimwe yeApple mafomu ayo anoita ekushandisa ekuwiriranisa kuburikidza neICloud.
Nekudaro, zvinogona kuve kuti kune vazhinji vashandisi vasingazive maitiro ekugadzirisa iyi application nenzira kwayo uye ndiko kuti kana iwe waita sevhisi pane yako Mac, iPhone uye iPad, chen iwe unogamuchira kufona, inogona kusvetukira kune vese kamwechete kana iwe wakazvigadzira.
Mazuva mashoma apfuura, shamwari yakanaka kwazvo, Manu Sierra, akandibvunza kana iyo Messages application yakangoshanda chete nenhamba yefoni kana kana ichigonawo kugadziridzwa kuti ishandiswe neemail kana Apple ID. Ini ndakakurumidza kutaura kuti, zvirokwazvo, Iwe unogona kumisikidza iyo Meseji app kune yako kufarira uye sarudza neiyo data iyo iyo ichagadziriswa kana ivo vafona.
Sezvandambotaura, Meseji inogona kushandiswa kubva kune chero eApple zvishandiso asi isu tinofanirwa kuyeuka kuti kana isu tamisa MaMessage pane iyo iPhone, ichaita kuti ishandise sevhisi kuburikidza neSMS iyo inozobhadhariswa kune yedu foni bhiri. Uye kubva iyo nguva, kana chero munhu akatitumira meseji kunhamba yedu, isu tichaigamuchira. Hatigone kumisikidza kuti iyo iPhone haigamuchire mameseji akanyorerwa kunhamba yefoni iyoyo izvo zvatingaite mune mamwe majaira.
Kana isu tikapinda Meseji paMac uye mubhawa repamusoro tinodzvanya pairi Meseji> Zvaunoda Iwindo rinovhura matiri tine maviri tabo. Mune iyo tebhu Accounts Tinogona kuona rondedzero yenzira dzatinogona kubatana neMessage, ndiko kuti, nhamba yefoni uye maemail awakachengeta munhare yako kuwedzera kune Apple ID.
Pane zvishandiso zvakaita seMac, iPad kana iPod Kubata unogona kusarudza kana kwete iyo nhamba yefoni, iyo yausingakwanise kuita kubva ku iPhone uye ndokuti, Meseji pane iyo iPhone ichagara iine nhamba yefoni yakagadzirirwa. Kana iwe usina iPhone, hauzove nedambudziko iri uye uchave unokwanisa kusarudza pakati peemail awakarongedza.
Zvese zvandatsanangura zvinogona kugadziridzwa kubva kune yega yega kifaa mune iyo app yacho uye sarudza mune yega yega yavo neruzivo rwaunoda kuti ubate. Tichakugadziridza kana Apple ikazivisa nhau idzo dzakatoonekwa mune betas yeiyo inotevera vhezheni yeiyo system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Gadzira mameseji ane nhamba yefoni kana email account
Juan Fco akadaro
Pane iyo iPhone ini handina iyo nhamba yefoni yakagadzirirwa mumeseji yekushandisa imessages, ini ndinayo chete neemail
Pindura Juan Fco
Maitiro e vitaminize Finder windows
9x24 Podcast: password Mamaneja VS iCloud Keychain